Mpanamboatra mpampitohy - Orinasa mpamatsy mpampifandray any Shina
✭Miaraka amin'ny fanitarana tsy tapaka ny tsena robot, maro ny orinasa mpamokatra robot no nandefa fifaninanana henjana tokoa. Ny ain'ny serivisy robot, mampihena ny tabataba dia lasa olana ara-teknika lehibe. Ity ampahany amin'ny servo servo kely ity dia mitana andraikitra lehibe satria ny andiany tsirairay amin'ny robot dia mila servo hahatratrarana hetsika hafa.
✭Ny ampahany plastika dia ny ampahany amin'ny fonosana ho an'ny familiana servo, ary ny fitaovana plastika ampiasaina dia fitaovana avo lenta PA66 + 30GF. Amin'ny alàlan'ny fiasan'ny fitaovan'ny fitaovam-pamiliana servo, dia azo antoka fa tsy hivaingana sy hijanona milamina ny akorandriaka mandritra ny fivezivezin'ny kitapo. Ity akorandriaka plastika ity dia manana fepetra avo lenta amin'ny fahamendrehana ny bobongolo, indrindra ny fandeferana dimensional amin'ny lavaka fametahana fitaovana, mba hahazoana antoka fa ao anatin'ny faritry ny fandeferana 0,005mm. Ny akoranay bobongolo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora hafarana avy any Becu sy S136.
✭Ity akorandriaka plastika ity dia misy akorandriaka telo vita amin'ny plastika, akorandriaka ambony, akorandriaka afovoany ary akorandriaka ambany. Izy ireo dia tsy maintsy ampifanarahana tsara mba hahazoana antoka fa ny toerana afovoan'ny lavaka fametahana fitaovana dia mifanaraka. Noho izany, ho an'ity karazana plastika marimarina ity, ny lavaka famolavolana dia 2 ihany, mba hahafahana mifehy tsara kokoa ny habeny.